ပင်ပန်းဆင်းရဲကြီးစွာ နေထိုင်နေရတယ်ဆိုတဲ့ အကျဉ်းထောင်ထဲမှ ပိုင်တံခွန်ရဲ့ လက်ရှိမြင်ကွင်းများ…. – Cele Oscar
ပင်ပန်းဆင်းရဲကြီးစွာ နေထိုင်နေရတယ်ဆိုတဲ့ အကျဉ်းထောင်ထဲမှ ပိုင်တံခွန်ရဲ့ လက်ရှိမြင်ကွင်းများ….
June 7, 2021 By L YC Celebrity
ပရိသတျကွီး ရေ နှုတျခမျးနီမလေးမြားရဲ့ အသညျးကြျော မငျးသား ပိုငျတံခှနျကိုတော့ အငျးစိနျ အကဉျြးထောငျထဲ မှာ စဈကောငျစီ က ၅၀၅(က)ဖွငျ့ ဖမျးဆီးထားထားတာပါနျော။ပိုငျတံခှနျသာ မက အခွားသော အနုပညာရှငျ မြားစှာ လညျး အငျးစိနျထောငျထဲ မှာ ပါပဲနျော။ သူဟာ တောထဲတှငျ ခဏ
ထှကျပွေး တိမျးရှောငျခဲ့ပမေယျ့ ဌကျဖြားရောဂါဝဒေနာ ခံစား နရေတာ ပါနျော။
အဖမျးခံခဲ့ရတဲ့ နကေ့လညျး လမျးတောငျ မလြှောကျနိုငျ တာကွောငျ့ တှဲချေါ သှားခဲ့ရတဲ့ အထိ ပါပဲနျော။ စဈဆေး ရုံတှငျ ဆေးကုသ ပေးတယျလို့ သတငျးတဈခြို့ထှကျခဲ့ပမေယျ့ တကယျ မဟုတျခဲ့ ပွနျပါဘူးနျော။ အခု လကျရှိ မွငျတှရေ့တဲ့ ပုံတဈပုံကို လူမှု ကှနျယကျတှငျ ပွနျ့နှံ့ လာပွနျပါပွီနျော။
ပုံထဲမှာ တော့ သူ့ ရဲ့ ပုံစံဟာ တျောတျောလေး ကို ပိနျကသြှားပွီး မကျြနှာလေးပါ တျောတျော ကသြှားတဲ့ အနအေထားပါ။သူ့ရဲ့ ပရိသတျမြားကလညျး ဒီပုံမွငျပွီးနောကျပိုငျး ပိုငျတံခှနျ အတှကျ စိတျမကောငျးဖွဈနကွေတာပါနျော။ပရိတျသတျကွီး လညျး ပိုငျတံခှနျ အတှကျ ဆုတောငျးပေးကွပါအုံးနျော..။ဖတျရှု့ပေးသူ တဈ
ယောကျခငျြးစီ ကိုလညျး ကြေးဇူးအထူးတငျ၇ှိပါတယျ..။
ပရိသတ်ကြီး ရေ နှုတ်ခမ်းနီမလေးများရဲ့ အသည်းကျော် မင်းသား ပိုင်တံခွန်ကိုတော့ အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်ထဲ မှာ စစ်ကောင်စီ က ၅၀၅(က)ဖြင့် ဖမ်းဆီးထားထားတာပါနော်။ပိုင်တံခွန်သာ မက အခြားသော အနုပညာရှင် များစွာ လည်း အင်းစိန်ထောင်ထဲ မှာ ပါပဲနော်။ သူဟာ တောထဲတွင် ခဏ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်ခဲ့ပေမယ့် ဌက်ဖျားရောဂါဝေဒနာ ခံစား နေရတာ ပါနော်။
အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ နေ့ကလည်း လမ်းတောင် မလျှောက်နိုင် တာကြောင့် တွဲခေါ် သွားခဲ့ရတဲ့ အထိ ပါပဲနော်။ စစ်ဆေး ရုံတွင် ဆေးကုသ ပေးတယ်လို့ သတင်းတစ်ချို့ထွက်ခဲ့ပေမယ့် တကယ် မဟုတ်ခဲ့ ပြန်ပါဘူးနော်။ အခု လက်ရှိ မြင်တွေ့ရတဲ့ ပုံတစ်ပုံကို လူမှု ကွန်ယက်တွင် ပြန့်နှံ့ လာပြန်ပါပြီနော်။
ပုံထဲမှာ တော့ သူ့ ရဲ့ ပုံစံဟာ တော်တော်လေး ကို ပိန်ကျသွားပြီး မျက်နှာလေးပါ တော်တော် ကျသွားတဲ့ အနေအထားပါ။သူ့ရဲ့ ပရိသတ်များကလည်း ဒီပုံမြင်ပြီးနောက်ပိုင်း ပိုင်တံခွန် အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာပါနော်။ပရိတ်သတ်ကြီး လည်း ပိုင်တံခွန် အတွက် ဆုတောင်းပေးကြပါအုံးနော်..။ဖတ်ရှု့ပေးသူ တစ်
ယောက်ချင်းစီ ကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်၇ှိပါတယ်..။
မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ သူရဲကောင်းမလေး ကြည်စင် ငယ်ဘဝက အနုပညာရှင်များနဲ့တွဲရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံများ….
အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်ကနေ ယနေ့ (၇)ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ ဦးဇင်ဝိုင်း …..